Ukudla izitsha zokudla
Inyama yezilwane phakathi kwabazingeli baseSiberia inenani elikhulu kakhulu. Kuyinto enhle kakhulu futhi ngokungafani nesikhumba se-maral, inyamazane noma inyamazane, iqukethe amafutha amancane angenayo, i-roe inyama izitsha zingcono.
Inhliziyo, isibindi, izinso ze-roe inyamazane ziyigugu kakhulu. Ngoba baqoqa izinto ezidingekayo emzimbeni. Ikhwalithi ye-roe inyama yenyamazane ixhomeke lapho ichithwa khona, kusukela ngesikhathi sonyaka, kanye nangezinhlobo ezikhona. Ukuze ulungise izitsha kusuka inyama yezinyamazane udinga ukwazi amaqhinga amancane azokwenza izitsha ezivela ku-roe deer zibe mnandi kakhulu.
I-roe deer iphekwe ku-saucce e-creamy-cranberry
i-fillet ye-roe deer - i-300g.,
ama-mushroom amasha 50 g,
ubhekeni - 40g.,
amafutha yemifino - 20 g,
ama-cranberries - 40 g,
rosemary entsha - 5g.,
isaladi - iminyaka engu-45,
i-anyanisi - 20g.,
I-sirloin ye-roe deer kufanele ilahlwe ukuze i-pancake enobukhulu be-0.5 cm iphume, i-pepper, usawoti. I-bacon, u-anyanisi, ama-mushroom ahlanzekile anqunywa amacici omnqumo - gazinga emafutheni omnqumo (angashintshwa nanoma yikuphi amafutha omquba), futhi ahlale enyama. Okuphezulu nge ushizi osihliwe, ongenambitheka okhanyayo (i-Edamer, i-Gouda, njll). Rosemary esanda kumiswa - ufafaza phezu kweshizi. Gcoba inyama ibe yincwadzi, igcobe ngaphakathi, ixhumane ne-toothpick noma sibophe intambo. Siyifaka epanini lokuthosa nge-seam phansi futhi gazinga kuzo zonke izinhlangothi kuze kube yilapho kukhishwa i-crusty crusty. Ijusi elikhishwe ngesikhathi sokudoba inyama alithelisiwe, liwusizo nge-sauce. Bese ubeka kuhhavini bese ubhaka amahora angu-5-7. Uqedile umqulu uthathe izingxenye, phezulu nge-sauce, usebenze ushisa etafuleni.
Ephakeni lokuthosa nejusi elisele lenyama, uthele u-33% wekhilimu bese wengeza ama-cranberries, ubilise amaminithi amathathu, engeza usawoti ukunambitha uphinde ubilise amanye amaminithi amabili. I-sauce efundwayo isakazwa esitsheni, ehlotshiswe ngamaqabunga e-rosemary, anyanisi oluhlaza, ulethisi, nama-cranberries. Etafuleni sisebenzela esitsheni esihlukile. Le sauce izohambisana nanoma yiliphi isidlo esenziwe ku-roe deer.
Ukudla inyama ngokuhlobisa
inyama roe deer kusukela ngemuva - 1 kg.,
amanoni agubha ubhekeni - 500 gr.,
i-margarine (ibhotela) - 2 tbsp. l.,
anyanisi, izaqathe (ezihlukahlukene zekarotel) - 1 pc.,
ukhilimu - ¼ ilitha. ukhilimu.,
umhluzi wenyama okhishwa emanzini amancane - 1.8 amalitha.,
amapheya ekheniwe - amathini angama-½,
i-currant jelly - 2 tbsp. l., pepper, usawoti,
Kuyadingeka ukuba usike inyama emhlane wezinyosi kanye namathambo, usika kancane isikhumba. Ngenyama, yenza izinto ezincane, ezigcwele amafutha, usawoti kanye nopelepele. Ngomshini wokushisa ukushisa amafutha bese udosa ucezu ohlangothini lwenyama. Phenduka ngamathambo, ufafaze izaqathe kanye no-anyanisi, ngaphambilini uthathe izingcezu ezinkulu. Futhi ubhake kuhhavini ekushiseni kwamaminithi angu-225 degrees 40, ngezikhathi ezithile ethulule ijusi elidliwayo. Esidlweni esithile, hlaziya umhluzi wenkukhu ngekhilimu kanye nemizuzu eyishumi uze ulungele ukuthulula ingxube ephekwe ngenyama. Ukuphelisa inyama kususwe kuhhavini, uhlukanise inyama emathanjeni bese uthatha izicucu ngo-3 cm ubukhulu. I-Sauce ishiywe ngemuva kokudoba inyama, ukucindezeleka bese ukhonza etafuleni esitsheni esihlukile. Amapheya akheniwe angakhanjiswa nge-currant jam bese uwahlobisa ngenyama. Ukukhonza ama-chanterelles okuthosiwe, ama-potato croquettes noma amahlumela aseBrussels.
I-Azu kusuka ku-roe deer
ham (i-pulp) - 1 kg.,
amafutha yemifino - 8 tbsp. l.,
anyanisi - ama-2 ama-pcs.,
Thatha inyama yenambuzane encane, ususe ifilimu kuyo, isuse, usike ube yizicucu ezincane mayelana nobubanzi obuyi-2 cm, uyilahle ngommese. Usawoti, pepper, namafutha kunoma yimuphi amafutha emifino, shiya ingxenye engamahora. Thela amafutha epanini lokuthosa nge-Teflon yokugqoka, ubeke inyama epanini elitshisayo kahle bese usheshe ukhiphe amahlangothi amabili. Ngaphambi kokukhonza, ufafaze anyanisi oqoshiwe bese uthele ku-ketchup. Khonza ngamazambane othosiwe, ama-buns noma isinkwa esimnyama.
inyama ham noma ingxenye yomgogodla - 1 kg.,
amafutha yemifino - 50 gr.,
ufulawa - 2 tsp,
usawoti, pepper ukunambitha, iparsley.
Inyama yehhafu noma i-rump ye-roe deer ecacile yamafilimu, hlambulula kahle, uthathe izicucu zibe ngu-3 cm obukhulu, udangele kancane, uphepele, usawoti, ufafaze ngamafutha omifino. Beka ezinye izitsha ezijulile, u-anyanisi oguqukayo (uthathe izingcezu), imifino ka-parsley. Beka ngaphansi kokucindezelwa futhi ubeke endaweni ebandayo amahora amabili.
Esikhathini sokupaka nge-Teflon yokugqoka, ubeke izingcezu zamafutha aqoshiwe, ufudumele, ufune inyama elungiselelwe. Isidlo esilungele ukubeka isidlo esandulele, kusukela phezulu ukuthululela isobho esilungisiwe.
Ngenkathi ushaka inyama, udinga ukupheka umsizi.
Phakeni nejusi elisele ngemuva kokuthosa, engeza ½ indebe yamanzi, engeza ibhotela, ucezu ufulawa, usawoti bese ubilise kahle. Kubalulekile: amafutha epanini lokuthosa kufanele ashintshwe ngemuva kokudla inyama, uma lokhu kungenziwanga, isoso sizoshiswa.
Ukuhlobisa kusebenza kahle ngamazambane othosiwe, amafries aseFrance, ilayisi abilisiwe, utamatisi isaladi, isaladi ye-beet ne-horseradish.
inyama evela ku-scapula, noma i-ham - 1 kg.,
ibhotela noma imajarini - amagremu angu-100,
fat fat - 100 g,
amajikijolo omjunipha - ama-2 ama-pcs.,
i-red ground pepper - 2 tsp,
umsila omnyama, ukhuni ochotshoziwe - ½ tsp,
inkomo yenkomo - ¼ st. l.,
Umfula - 1 tbsp. l.
Ukudla kahle kwamafilimu, hlambulula kahle, uhlukaniswe namathambo, uthathe izingcezu ezinkulu, upheke ekucindezelweni kwepheki, lokhu kubeka ingcindezi yokupheka ebhotela, u-anyanisi oqoshiwe, ubhekeni olunamafutha, olukhulu. Engeza i-cumin, i-pepper ebomvu neyomnyama, u-anyanisi, inyama, usawoti, uhlanganise kahle futhi gazinga imizuzu engu-7. Engeza umhluzi wenkomo bese ubamba imizuzu engu-20-30. I-Goulash yakhonza ngamazambane ahlambulukile, ama-croquettes amazambane, ilayisi elithambile, isaladi yemifino noma i-compote.
I-Zrazy ye-roe deer
1-1.2 kg. inyama yenyama,
3-4st. nezinkezo zamafutha zemifino,
100g we-bacon tincetu,
1 ithisipuni capers ochotshoziwe,
5 amajikijolo of juniper,
3 i-peas of coriander,
1 tbsp. i-spoon kafulawa, usawoti, pepper,
2 ukhukhamba oqoshiwe.
Nquma ama-rosewood we-roe deer avela kumafilimu, hlambulula kahle futhi uthathe amathanga amabili ububanzi obukhulu no-5-7 cm ububanzi. Izingcezu zizobe zinyanyiswa kancane, zikhunjulwe kanye nosawoti. Esikhathini ngasinye ubeke u-anyanisi we-anyanisi, ucezu lwekhukhamba, roll rolls. Ukuze uqiniseke ukuthi imiqulu ayiguquki, kudingeka iboshwe nge-thread, roll in ufulawa ngesinkwa sezinkwa, uthele amafutha epanini lokudoba, ufudumele, uphelele emagqabini e-frying nge-seam phansi futhi gazinga nhlangothi zombili.
Uma ama-juice eqala ukuvela emigqumeni, adinga ukwengeza amajikijolo omjunipha, i-capers, i-coriander, uthele amanzi amancane, uvale isembozo kanye nokumisa kuze kube yilapho usulungile, njalo uthele amanzi.
Ukuhlobisa kungasetshenziswa ngamazambane othosiwe noma abilisiwe, ama-potato croquettes, isaladi yemifino, ilayisi elibilisiwe noma i-compote.
Ukupheka kwezitsha ezijabulisayo zemikhosi
Ubuchwepheshe obuhle bokupheka yenkomo kuhhavini
I-saumon ephuzi ebomvu kuhhavini
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ziyi-Italy
I-metabolism namandla okuguqulwa emzimbeni womuntu
Ubuhle bebusika: Indleko Yensiza Yomkhumbi Wonyaka Omusha Yentombazane enezandla Zakhe
I-Icelandic moss iyisitshalo somuthi
Izindlela zengqondo zokuphathwa kokwelashwa
Indlela yokukhipha imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo: izindlela ezintathu eziphumelelayo
Coar cockar and cranberry
UKarl Lagerfeld uqala ukuqoqwa koboya bemvelo kuFendi
Izimpahla ezifakiwe kakhulu zezinkanyezi ze-"The Most Stylish Russia" 2016, umklomelo
I-cosmetology yama-laser ngokumelene namamaki welula: yini okudingeka ukwazi?